मैत्रीपूर्ण फुटवल खेलमा नेपालले जापानलाई हरायो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > मैत्रीपूर्ण फुटवल खेलमा नेपालले जापानलाई हरायो
काठमाडौ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा जापानलाई १–० ले हराएको छ ।
नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध ६०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा भएको खेलमा नवयुग श्रेष्ठले ५७औँ मिनेटमा गरेको एकमात्र गोल निर्णायक साबित भयो । नेपालले पाएको कर्नर किकपछि डिबक्समा भएको हुलमुलमा उनी गोल गर्न सफल भए ।
जापानी टोलीका प्रशिक्षक टोडा काजुयुकीले सन् २००२ को विश्वकपमा जापानका तर्फबाट तथा अङ्ग्रेजी क्लब टोटेनह्याम हटस्परबाट व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए । खेलपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजीले आफ्नो टोलीको खेलमा धेरै विकास भएकोभन्दै प्रशंसा गरे ।
जापानी प्रशिक्षक काजुयुकीले आफ्नो टोलीले सुन्दर फुटबल खेल देखाउन सकेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नेपाली टोलीले रक्षापंक्तिमा भएका गल्ती सुधार गरेमा टोली अझ सशक्त हुने बताए ।
२०७३ मंशिर ४ गते २०:३४ मा प्रकाशित
विकास बैंकले दिँदैछ ३४ प्रतिशत बोनस सेयर, अनि ४० प्रतिशत हकप्रद !
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजैदेखि काममा फर्किन सर्बोच्चको आदेश ! (पूर्णपाठसहित)
चोरीका घटना बढ्यो, देशभर दुई हजार ६४६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर